Maanguddoota Tuullu Farraa: Namoonni dhuman fooniifi dhiiga keenya waan ta'aniif wanta aadaan ta'uu qabu ni goonaaf - BBC News Afaan Oromoo
Maanguddoota Tuullu Farraa: Namoonni dhuman fooniifi dhiiga keenya waan ta'aniif wanta aadaan ta'uu qabu ni goonaaf
20 Bitooteessa 2019
Jiraattoonni aanaa Gimbichuu naannoo Tulluu Farraa, bakka xiyyarri Itoophiyaa itti caccabe, namoonni asitti dhuman dhiiiga keenyaafi foon keenya waan ta'aniif dhiigni isaanii bilaasha dhangala'ee hiin hafu jedhan.
Jirrattoota keessaa tokko kan ta'an maanguddoo Tsagaayee Warqiinaa BBC'tti akka himaniitti, haaluma aadaafi dudhaa Oromootiin namoota dhumaniif gumaa baasuuf qophiirratti argamna jedhan.
Maatii warra namni jalaa dhumee caalaa gaddaan miidhamaa kan jiran jiraattota naannoo Tulluu Farraa ta'us himaniiru.
"Erga gaafa balaa sanaatii jireenyiyyu jireenya nutti fakkaachuu dide. Ganamnis galgallis boo'ichuma ta'e. Jagni kuni hundi asitti kufee yoo hafu akkamitti nagaa arganna,'' jechuun miira gadda cimaa keessatti argaman ibsu.
Tulluu Farraa: Bakki balaa ET302, akkamiin moggaafame?
Balaa xiyyaaraan maatiifi firoonni sanduuqa reeffa hinqabne owwaallatan
Boeing xiyyaara 737 Max hunda hojii dhaabsise
"Siriiyyuu yaaduma dhaabbannee deemna malee erga balaan kuni qe'ee keenyatti dhufee guyyaan halkan nutti ta'eera. Gaddichi kanuma keenya waan ta'eef kan hoodaa hunda ni goonaaf," jedhu Obbo Tsaggaayeen.
Jiraataan naannichaa kan biraa Obbo Baatirii Lammaa ammoo, barana malkaa bu'uufi tulluu baahuun uumaa guuttachuu waan hanqanneef balaan hamaan kun qe'ee keenyatti dhufte jedhaniiru.
Manguddoonni naannichaa balaa qaqabee haaluma aadaafi duudhaa ganamaa ittiin bulaa turaniin hiika kennuun, lubbuun namootaa qe'ee isaaniitti darbes sababa tokko malee akka hintaane amantaa jedhu qabu jedhu.
"Kanaafuu akkuma amantaatti namoota qe'ee keenyatti dhume kanaaf dunkaana dhaabnee taskaara baasuun ofirraa falanna,'' jedhan.
Keessattuu balaa hamaan akkanaa kun qe'ee isaaniitti kan mudateef waan barana aadaafi safuu osoo hin guutiin hafneefii jechuun yaadu manguddoonni Ganda Tulluu Farraa.
Maanguddoo Baatirii Lammaa "Akka uummata naannoo kanaatti malkaafi tulluu qabna. Maanguddoon dur bonni yoo hammaate gaara Bokkaa gubbaarratti bahuun horii qalee, dhiiga lafa buusuun waaqa kadhata. Osuma ciincaa nyaatanii hin raawwatiinis waaqni ni roobaaf."
Sababiin malkaa bu'amee kadhatamuufis bakka jiidhaatti waaqa waan hunda uume kadhachuufi galateefachuufi malee malkaatti waaqeffachuuf akka hin taanes himu, Obbo Baatireen.
Amma garuu akkaataan namni itti malkaa bu'ee tulluu bahee itti waaqasaa galteefatu akka duriirraa goraa dhufeera jedhu.
"Malkaa kan bu'amu erga kan wal loole walii araaramee dhiifamaan garaa walii qulqulleeffateen booda. Suni garuu har'a hin jiru. Namni wal loolee, wal maddeessee, wal ajjeesee gumaa namaa dhokseeti kan wajjin malkaa bu'u."
Nannichatti waggaa waggaan sirni kadhannaa malkaa kan gaggeeffame yoo ta'u, bara kana garuu sababa namni walii hin galleef hunduu hin raawwatamne. Kanaaf qe'ee keenyatti balaan akkanaa dhufe jedhu.
"Akka maanguddoon hin jirree, akka uummata aadaafi duudhaan badeetu natti mul'ata. Dhaloonnis eenyummaasaa gataa jira. Uumaan ganamaa keenya hafaa waan deemeef wanti kana dura dhageenyee hin beekne qe'ee keenyatti kan dhalate," amantaa jedhu qabu Obbo Baatiriin.
"Kanaafu, nuti akka biyyaatti waa'ee qe'ee keenyatti uumamee kanaaf beekaa gaafannee, caffee gaafannee waan ta'u tokko gochuu qabna. Balleessaa keenyas gaafannee baruu qabna."
Gama aadaa qofaan osoo hintaanees, jiraattonni aanaa Gimbichuu Ganda Hamaa Qunxushulleefi Tulluu Farraa, namoota balaa xiyyaaraatiin naannoo isaaniitti du'aniif akkaataa amantaa Ortodoksiitiin bakka balaan itti gahe kanatti sirna kadhannaafi taskaara baasuutiifis qophaa'aa jiru.
Obbo Tsaggaayee Warqinaa, Maanguddoon naannichaa gaddi kuni kanuma keenya silaa uffata gurraacha bitanneeyyuu gadduu qabna jedhu.
"Erga duuti namoota kunneenii guyyaa 12 guute boodas bakka kanatti dukkaana dhaabnee, batasakaanarraa qeesoonni dhufanii kadhannaan godhameefii, taskaarri isaanii bahee, nuufis warra qe'ee keenyatti lubbuun darbe kanafis faloo baasuu qabna."
Hawaasni ganda lamaaniis qophii sagantichaatiif bakka balaan gaheetti walgahanii mari'achaa turan.
Sirna kadhannaafi taskaara baasuu akka amantaatti erga raawwatameen boodas akka aadaatti beekaa gaafannee dhimmicha qorannaa jedhu Obbo Tsaggaayeen.
Namni asitti dhume kuni nama keenya, foon keenya, dhiigni isaanii akkasumatti bilaasha dhangala'ee hiin hafu kan jedhan naanguddoo Tsagaayeen, haaluma aadaafi dudhaa Oromotiin namoota dhumaniif gumaa baasna jedhaniiru.
Balaa Xayyaaraa ET302: Tulluu Farraa, maqaa kana eessaa argate?
Balaa Xayyaaraa ET302: Boeing xiyyaara 737 Max hunda hojii dhaabsise
ET 302 : Waa'ee gosa xiyyaaraa 'Boeing 737 Max-8' maal beekna?
11 Bitooteessa 2019
Daandii Xiyyaara Itoophiyaa: Maatiin namoota balaa xiyyaaraan dhumanii saanduuqa reeffa hin qabne awwaalatan